किन गर्न हुँ दैन एउटै गो त्र भएकासँग विवाह ? यस्तो छ धर्मशास्त्रको नियम, जन्नुहोस – Khabar 27 Media
किन गर्न हुँ दैन एउटै गो त्र भएकासँग विवाह ? यस्तो छ धर्मशास्त्रको नियम, जन्नुहोस
February 18, 2021 February 18, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on किन गर्न हुँ दैन एउटै गो त्र भएकासँग विवाह ? यस्तो छ धर्मशास्त्रको नियम, जन्नुहोस
काठमाडौं । हाम्रो धर्मशास्त्रमा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । गोत्र शब्दको अर्थ हो वंश र कुल । विषेश गरेर गोत्रको कुरा उठाउँनुको उदेश्य भनेको कुनै पनि व्यक्तिको वंशसँग वा पुर्खासँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहनु हो । जस्तै तपाईको गोत्र भारद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो तपाईँको वंश वैदिक ऋषि भारद्वाजबाट शुरु भएको हो । अर्थात् तपाई भारद्वाज ऋषिका सन्तान भित्र पर्नुहुन्छ । हाम्रा अग्रज तथा बुवा आमाहरुले हामीलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे बताइरहनु भएकै हुन्छ । किन एउटै गोत्रमा किन विवाहमा गर्नु हुँदैन । हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।
भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, काश्यप, सप्त ऋषिको नामले चिनिन्छन् । यसमा आठौं ऋषि अगस्तिका सन्तान ‘गौत्र’ भनेर चिनिन्छन् । विवाहमा गोत्रको ठूलो महत्व छ र विवाह गर्नुअघि वा बर बधुको विवाहको कुरा चलाउनु अघि एउटै गोत्र पर्छ कि पर्दैन सबै बुझेर मात्र हाम्रा अग्रजहरुले कुरा चलाउँनु हुन्छ । पुराणमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै बर वा बधु सहगोत्री छन्÷छिन् भने विवाह गर्ने अनुमति जतिसुकै प्रेम भएपनि दिनु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा केटा केटीको मन परापर भएर प्रेम हुने, प्रेमपछि विवाहको कुरा चल्दा गोत्र एउटै भएर विवाह रद्ध हुने अवस्था पनि आउँदछ ।
मनुस्मृति लगाएत अन्य शास्त्रमा विवाहलाई दुई आत्माबीचको पवित्र मिलन भनेको छ । आफूले चाहेर मात्र नहुने । देखेको नपाइने, लेखेकै हुनुपर्ने तथा विवाहका लागि सूर्य भगवानले नै तोकिदिएको हुने कुरा उक्त स्मृतिमा चर्चा छ । स्कन्धपुराणको केदारखण्डको श्रीस्वस्थानीले पनि यही विचारलाई समर्थन गरेको छ । हाम्रो समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदाय अनुसार विवाह कर्ममा केही फरकफरक संस्कारहरू पाइन्छन् तर सामान्यतया हिन्दूधर्ममा वा ज्योतिषशास्त्रमा विवाह गर्नको लागि वर र कन्याको कति गुण हुनुपर्दछ यसै बिषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
चि,तामा आ,गो लगाएपछि चल्मलाउन थाले व्यक्ति, ड,राएर भागे मलामी
आमाको मृ, त्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बिच्चली
May 27, 2021 May 27, 2021 Shyam Lama